Muummichi ministiraa Isiraa'el himannaan malaamaltummaa isaan mudachuuf jira - BBC News Afaan Oromoo
Muummichi ministiraa Isiraa'el himannaan malaamaltummaa isaan mudachuuf jira
Goodayyaa suuraa Neetaniyaahuun si'aa hedduu qorannaaf dhiyaataniiru
Poolisiin Isiraa'el Ministeera Muummee Beenjaamiiin Neetaniyaahuu shakkii dhimmoota matta'aa waliin walqabatee irratti dhiyaataa jiruuf himatamuu qaba jedhan.
Ibsi poolisii akka jedhutti Neetaniyaahuun dhimmoota addaa ba'an lamaan matta'aa, waliin dha'uufi amantaa cabsuudhaan himatamuu akka danda'an ragaan ga'aa ta'e jira.
Haasawa TVn taasisaniin, Neetaniyahuun himannaan isaanirratti dhiyaate dhara waan ta'eef ministeera muummichaa ta'een itti fufa jedhan.
Himanni kun, "waan fidu hin qabu" jedhan.
Himannaan kun maalidhaa?
Dhimmi tokko kan irratti xiyyeeffatu Neetaniyaahuun mana maxxansaa gaazexaa Isiraa'el Yedi'oot Ahaaronoot jedham akka inni gabaasa qajeelaa ta'e gabaasuun yaada maxxansa warra mormitootaa fashalsiisuuf gargaarsa gaafate kan jedhu ture.
Kana malees, gulaalaan Yedi'oot Ahaaronoot Arnoon Mooziisis akka seeraaf dhiyaachuu qaba jedha poolisiin.
Himannaan lammaffaa Obbo Neetaniyaahuu, kan bara 2009 irraa kaasanii ministeera muummee Isiraa'el ta'uun hojjechaa jiran irratti dhiyaatemmoo dureessa Hollywood Arnoon Milchaan irraa kennaawwan yoo xiqqaatan sheekel miliyoona tokko ($283,000; £204,000) akka ta'u tilmaama fudhataniiruudha.
Akka Yerusaalem Poosti jedhutti kennaawwan kun shaampaanyiifi sijaaraa kan of keessatti qabatu yommuu ta'u kunis deebii Obbo Milchaan aka Viisaa Ameerikaa argatan gargaaraniif jedhame.
Obbo Milchaan, 'Fight Club, Gone Girl fi 'The Revenan' dabalatee qopheessaa fiilmiiwwan kan ta'e seeratti dhiyaachuu qaba jedha poolisiin.
Goodayyaa suuraa Arnoon Milchaan (gidduu) Leonardo DiCaprio fi Steven Spielberg waliin
Akka ibsa poolisiin kun jedhutti erga kennaawwan kana fudhatanii Obbo Neetaniyaahuun, seera Milchaaniif tolu saffisaan hojiirra oolmaasaatiif hojjetan. Innis Namni biyyaa alaatii deebiyee Isiraa'el keessa jiraatu waggoota 10f akka gibira irraa bilisa ta'udha.
Dhuma irratti yaadni dhiyaate kun ministeera maallaqaatiin dhowwame.
Obbo Neetaniyaahuun dhimma dureessa Awustiraaliyaa kan ta'an Jaamsi Paaker waliin walqabaturrattis akka waliin dha'aniifi amanamummaa cabsan shakkamu jedha ibsi poolisii kun.
Chaanaaliin 10ffaa Isiraa'el Mudde keessa akka gabaasetti Obbo Paaker qorattootatti akka himetti ministeera muummichaafi haadha warraa isaaniitiif kennaa akka kenne dubbateera.
Midilaayeen Isiraa'el akka gabaasaa jiranitti Obbo Neetaniyaahuun yoo xiqqate qorattootaan si'a torrbaaf gaafatamaniiru.
Murteen dhumaa Obbo Neetaniyaahuun himatamuu ilaalchisee waajira abbaa alangee waliigalaatiin kennama. Murtee kanarra ga'uudhaafis ji'oota fudhachuu mala.
Ministeerri Haqaa Ayeleet Shaakid akka jedhanitti ministeerri muummee himannaan irratti dhiyaate kamiyyu aangoo gadi lakkisuun dirqama miti.
Haasawaa TV Isiraa'el irratti taasisaniin Obbo Neetaniyaahuun hojii isaanii itti fufu.
Filannoowwan seera-baastotaa itti aanu Sadaasa 2019 dhufutti saganteeffameera. Obbo Neetaniyaahuu garee paartii tokkumaan isaa laafaa ta'e gaggeessaa jiru, garuu himannaan kun filannoo haarawaa hin kakaasu jechuun afitti amanamummaan TVn dubbataniiru.
Obbo Neetaniyaahuun attamiin deebisan ?
Ibsa TV irratti kennaniin, "Waggoota darban keessa, yoo xiqqate gaaffiifi qorannoon 15 ta'aniif dhiyaadheera," jedhan.
"Gariin isaanii kan akkuma galgala kanaa dhaadannaama poolisii qofaadha. Yaaliiwwan turan hunduu bu'aa hin buufne waan ta'eef ammas waan tokkoyyu hin argatan."
Amma ganna 68 kan ta'an Neetaniyaahuun ministeera muummichaa ta'uun marsaa lammaffaaf, walii galaan waggoota 12f tajaajlaaa jiru.
Yeroo hojii isaanii keessatti si'a baayyee himannaan iirratti dhiyaateera.
Marsaa jalqabaatiif yeroo ministeera muummee ta'ani turanitti inniifi Saaraan kennaawwan biyyaaf kennaman akka qabeenya dhuunfaa isaanitti fudhachuun akka seeraan isaan gaafachiisu poolisiin akeekkachiisee ture. Himannichi garuu dhumarratti ni dhiifame.
'Rakkoon Dirree Dhawaa keessatti mul'atu qaama rakkoo biyyattii keessatti mul'atuuti'
Saawwan galaanaan fudhataman ji'ootaan booda lubbuun argaman